Waxay soo jeedinayaan abuuritaanka haamo macmal ah si loo dhaliyo tamar | Cusbooneysiinta Cagaaran
Daniel Palomino | | Tamarta biyaha badda, Noticias
Boqortooyada Midowday, gaar ahaan Shirkadda Tidal Lagoon Power waxay ka dhigeysaa mid casiir leh, haddii shaki ku jiro aragtidayda, soo jeedin lagu dhiso a shabakadaha hareeraha hareeraha dhammaan xeebta Boqortooyada Ingiriiska si ay u siiso dadka degan il tamarta dib loo cusboonaysiin karo.
Abuuritaanka harooyinkaas macmalka ah Taasi waxay u egtahay fikrad aad u hami weyn oo dhinaca shirkadan ah waxay badanaa ku saleysan tahay inaad ka faa'iideysan karto tamarta hirarka in badeecooyinkani ay abuuri doonaan markay yihiin heerar kala duwan oo u dhexeeya labada mugga biyaha, iyagoo iska dhigaya mawjadaha.
Haddii aadan xasuusan waxa ay tamartaan ka kooban tahay, waxaad eegi kartaa maqaalka "Farqiga u dhexeeya tamarta qulqulaya iyo tamarta mawjada"
Waxay rabaan inay la mid noqdaan milleteriga kuwaas oo qarniyo ka faa'iideysanayay awoodda biyaha markay marayaan mashiinnada si ay u awoodaan inay shiidaan badarka, taas oo heerka tarjumaadda halkii laga heli lahaa giraangirta wax lagu shiido ay helayaan marawaxad iyo halkii ay dabayshu ka dhici lahayd Waxay isticmaalaan qulqulka qulqulka, maaddaama ay marawaxadaha ficil ahaan la mid yihiin marawaxadaha dabaysha oo ay ku kala duwan yihiin dabayshu.
1 Maxaad ugu sharraxeysaa abuurista badaha macmalka ah?
Maxaad ugu sharraxeysaa abuurista badaha macmalka ah?
Halkii laga dhigi lahaa awoodda dabaysha waxay doorteen tamar dabeyl ah cufnaanta biyaha darteed, gaar ahaan cufnaanta hawadu waxay 832 jeer ka cufan tahay biyaha badda, taas oo macnaheedu yahay dabayl ah 350 km / saacaddii waxay leedahay tamar aad u yar oo firfircoon marka loo eego xaddiga badda ee 5 gunti.
Guntin Xudhuhu waxay u ekaan karaan nidaam cabbirka badda, laakiin si aan u hubsado waxaan kuu sheegayaa in gunti u dhiganta 1,85km / h, marka 5 gunti waxay noqonaysaa 9,26 km / h, taas oo aad ku arki karto inay tahay kala duwanaansho Aad ayaan ugu mahadcelinayaa cufnaanta biyaha badda.
Waxaan sidoo kale leenahay faa'iidada taas Marawaxadaha kacsan ayaa aad uga yar marawaxadaha marawaxadaha hawlgalkeeduna aad u fudud yahay.
Way ku filan tahay in marawaxad kastaa ay wareegto si ay u dhaliso koronto loo arko inay lagama maarmaan tahay ka dibna dhulka ayaa loogu wareejiyaa iyada oo la adeegsanayo fiilo.
Tidal Lagoon Power, taasi waa, kuwa mas'uulka ka ah shirkadda waxay soo jeediyeen in laga bilaabo tijaabo lana sameeyo markabkii ugu horreeyay ee ay dadku sameeyaan ee Swansea Bay oo ku yaal Wales.
Tan ayay ku qiyaasaan inay helaan keena ilaa 150.000 qoys wax ka yar, si hadhow loo abuuro nusqaamo badan oo noocan ah oo aad tolida shabakad si loogu daro mashruuca 6 harood badan oo ku yaal Colwyn Bay, Somerset, Cardiff, West Cumbria, Bridgwater iyo Newport.
Awood u lahaanshaha ku daboolida awoodda daadka illaa 8% baahida UK.
Haddii aadan wali la qabsan karin baaxadda mashruucan, samee sawir maskaxeed ah "lagoon" (mid ka mid ah harooyinka la soo jeediyay) oo leh 22 km oo ah caqabado macmal ah oo badda dhexdeeda ah oo leh qiyaastii 90 mashiin.
Maraakiibtani korantada ee korontada ku shaqeeya waxay noqon doonaan kuwo hagaagsan oo rakibaya rakibaadda wax ka badan 7 mitir oo dhexroor ah, ugu yaraan waa tan shirkaddu rabto inay rakibto.
“Awoodda teori teediga ah ee ugu badan ee lagu qaban karo sannad gudihiis xilli la mid ah, laakiin iyada oo aan lagoon macmal ah, waxay gaaraysaa 20% of tamarta hirarka. Tiknoolajiyadda aan isticmaalno wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kordhiso kootadan ilaa 60%”, Waxay sharrax ka bixinayaan shirkadda.
Wasiirka Tamarta ee Ingiriiska ayaa horay u siiyay ogolaanshaha in kasta oo dabcan, soo jeedintani sidoo kale ay leedahay kuwa ka soo horjeeda oo tilmaamaya in kharashka shaqadu uu kordhin doono biilka guriga 34 euro ugu yaraan 120 sano, oo gaadhaya wadarta kharashka ku dhowaad 1.200 milyan oo yuuro.
Haddii aad ii oggolaato inaan ra'yigayga ka dhiibto arrintan, ka dib i sii taada adigoon ka labalabeynaynin, anigu kama walwalayo biilka maxaa yeelay dhammaadka maalinta waxaad maalgashanaysaa tamar la cusboonaysiin karo oo waarta oo mustaqbalka fog (120 sano ayaa aad u badan) waa lagu bixin doonaa maxaa yeelay waxaad si weyn u yareyn doontaa isticmaalka korontada, laakiin waxaan aad uga walaacsanahay saameynta deegaanka ee tani ay soo saari doonto.
Tan waxaan ula jeedaa inaan ka dhiso badda 6 ama 7 wabi macmal ah qiyaastii 22 km oo carqalado ah waxay baabi'in doontaa inta badan nidaamka deegaanka ee horseeda khalkhal aad u weyn iyo luminta kala duwanaanshaha noolaha.
Marka waa inaad si dhow u fiirisaa dhammaan noocyada faahfaahinta oo aad qiimeeysaa saameyntaas iyo kuwa kale oo yar, xitaa haddii ay tahay in lagu sharfo tamarta la cusboonaysiin karo, sidoo kale waa inaan ka taxaddarno wixii aan horay u haysannay oo aan lumin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » General » Noticias » Waxay soo jeedinayaan abuuritaanka harooyin macmal ah si loo dhaliyo tamar.
Waxaan leenahay dariiqyo, estuaries iyo marsooyin kuwaas oo sameyn kara saameyn isku mid ah iyada oo laga yaabo inay ka yar tahay kharashyada dhaqaale iyo kuwa deegaanka, sida warshadaha qulqulka. Faransiiska gudaheeda waxaa ku yaalay xarun koronto oo meromotive ah sanado
Jawaab Emilio Martin
Xaqiiqdii waad saxantahay Emilio, waxaa jira waxyaabo aad u fudud in la sameeyo oo sida muuqata saameyn hoose oo deegaan ah, taas oo had iyo jeer jiri doonta.
Boqortooyada Ingiriiska sida muuqata waxay doonayaan inay weynaadaan laakiin wax kale ayaa ah inay awoodaan.
Waxaan iska ilaalin doonnaa si aan u aragno sida mashruucu isu beddelayo iyo haddii la fulinayo iyo in kale.
Waad ku mahadsantahay faallooyinka iyo salaanta.